Home News Warar kala dawan oo laga helaya Duqayn ka dhacday Sh:heese
Warar kala dawan oo laga helaya Duqayn ka dhacday Sh:heese
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay duqeyn la beegsatay xubno ka tirsan Al shabaab oo Ku sugnaa gobolka shabeellada hoose,kana mid ah meelaha ay Al shabaab ku xooganyihiin.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah ka fuliyay degaan 25 KM dhanka waqooyi kaga beegan degaanka Kunyo Barrow ee gobolka Shabellada hoose Halkaas oo ay ciidanku ku dileen labo ka tirsan Al-shabaab sida lagu sheegay war ka soo baxay Dowladda Faderaalka Soomaaliya.
War ka soo baxay saraakiisha ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku ahaa hoggaamiyayaal ka tirsan isla markaana intii howlgal-kaasi socday aan wax khasaare ahi soo gaarin dadka shacabka ah.
Shalayay ayay aheed Markii Saraakiisha Ciidanka Dana bee Maraykanku tababaray ay sheegeen in Sarkaal Al shabaab u qaabilsanaa qaraxyada ay ku dileen Degmada Walaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Majirto Wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al shabaab oo ku aadan weerarada Dowladda Faderaalka Soomaaliya ay sheegtay in ay ka fulisay Gobolka shabeellaha Hoose.